January 2018 – CRM
UK Government has been 'unacceptably' slow to respond to persecution of Rohingya in Myanmar, MPs warn
International Development Committee condemns ministers’ decision to send just two UK experts to help prevent sexual violence against refugees An influential committee of MPs has criticised the Government for an “unacceptable” failure to respond to the plight of the Rohingya people in Myanmar. The House of Commons International Development Committee said ministers had not acted quickly enough in […]
Posted on January 16, 2018 Author swelsone	Comment(0)
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဒေသ ဖြစ်စဉ်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အီးယူနိုင်ငံများအကြား နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ်ပေးရေး စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အတွက် အီးယူဘက်မှ ရပ်ဆိုင်းလိုက်သဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ အနောက်နိုင်ငံများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အလုံးအရင်းနှင့် ၀င်ရောက်လာရန် မျှော်မှန်း၍မရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဦးက ဇန်န၀ါရီ ၇ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်တွင် ကျင်းပသည့် Myanmar Investment Outlook Seminar -2018 အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည်။ “၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ကောင်းတာတွေရှိနေသလို ကျွန်တော်တို့ မျှော်မှန်းသလို မဖြစ်တာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ မောင်တောဒေသမှာဖြစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေက ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အီးယူနဲ့ နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ်ပေးရေး စာချုပ်နဲ့ […]
Posted on January 7, 2018 Author swelsone	Comment(0)
ဒေါက်တာ Surakiart Sathirathai ရဲ့ ရခိုင်အရေး ပထမဆုံးပြောဆိုချက်များ
ရခိုင်ပြည်ကို သတင်းမီဒီယာနဲ့ အကူအညီပေးသူတွေ ၀င်ခွင့်ပြုဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီရဲ့ အကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ထိုင်း ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာ Surakiart Sathirathai က ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဖမ်းခံထားရတဲ့ ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးကိစ္စ မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတဦးနဲ့ တွေ့ဆုံချိန် သူပြောဆိုခဲ့ တယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြံပေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ကတည်းကဆိုရင် ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်း မီဒီယာတခုနဲ့ ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ဒေါက်တာ Surakiat က အဲဒီလိုပြောထားတာပါ။ ရိုက်တာသတင်းဌာနက တွေ့ဆုံမေးမြန်းချိန်အတွင်း ဒေါက်တာ Surakiat ပြောထားတာတွေကို စုစည်းပြီး မအင်ကြင်းနိုင်က ပြောပြပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူသားစာနာမှု အကူအညီပေးသူတွေ၊ သတင်းသမားတွေကို အကန့်အသတ်မရှိ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ပေးသင့် […]
The visit is undertaken, in coordination with the government of Bangladesh, to ascertain the human rights and humanitarian situation of the Rohingyas in Myanmar A delegation of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) will visit the Rohingya camps in Cox’s Bazar. The delegation will visit the camps for four days from Wednesday to acquire first-hand […]
Posted on January 2, 2018 Author swelsone	Comment(0)
Posted on September 3, 2018 Author rightsforburma rightsforburma
Posted on September 29, 2017 Author swelsone
Malaysia calls for Asean to lead push for end to Rohingya crisis
Posted on December 20, 2016 Author rightsforburma rightsforburma